एउटै वडामा १४० क्विन्टल लसुन उत्पादन - कृषि पत्रिका
आइतबार ३२ जेठ, २०७७	comments
रुकुमपश्चिम। रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१० का किसानले करीब १४० क्विन्टल लसुन उत्पादन गरेका छन् । वडाका झ्याङ, चौर, गलमपाटी, चुनलगायतका गाउँमा लसुनखेती गर्ने गरिन्छ ।
उत्पादित लसुन जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । वडा सदस्य धनबहादुर खड्काले १०६ क्विन्टल लसुन जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदा रू। १३ लाख भित्रिएको जानकारी दिए । यसबाट किसानले रू. २०/२५ हजारदेखि सवा लाख बढीसम्म आम्दानी गरेका छन् ।
वडा कार्यालयको पहलमा रू. ३ लाख ५० हजार बराबरको ३४ क्विन्टल लसुन बीउका लागि गाउँमै राखिएको छ । यो वर्ष किसानले लसुनमा प्रतिकिलो रू. १०० पाएका छन् । गत वर्ष प्रतिकिलो रू. ८० मा लसुन विक्री गरेका थिए ।
उत्पादित लसुनले बजार पाएपछि किसान हर्षित भएका छन् । दाङका व्यापारीले गाउँमै आएर लसुन खरीद गरेर लगेको किसानले बताएका छन् । दुई वर्ष अगाडिसम्म लसुनले बजार नपाएर चिन्तित बनेका किसानहरु गत वर्षदेखि भने वडा कार्यालयको पहलमा बजार पाएपछि लसुनखेतीमा आकर्षित भएका छन् ।
वडाका धेरै ठाउँमा लसुनखेती हुन थालेको किसान झुपलाल खड्काले जानकारी दिए । ‘उत्पादित लसुनले बजार पाउन थालेपछि वडाका धेरै ठाउँमा लसुनखेती हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘गाउँबाटै व्यापारीले लसुन उठाउने गरेका छन्, सजिलै विक्री हुन थालेपछि लसुन उत्पादनमा धेरैको आकर्षण बढेको छ ।’
उनले रू. १ लाख २३ हजारको लसुन विक्री गरेको जानकारी दिए । यसैबीच वडा कार्यालयले नै किसानका लागि बीउको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसका लागि २ हजार २०० किलो लसुनको बीउ वितरण गरेको वडा कार्यालयले बताएको छ ।
यसका साथै बजारीकरणमा पनि ध्यान दिएको वडाको भनाइ छ । स्थानीयसहित जिल्ला बाहिरका व्यापारीलाई गाउँमा ल्याउने काम वडाले गरिरहेको वडाध्यक्ष गोप्यश्वर केसीले बताए । रासस